विदेशबाट दैनिक ६ हजार नेपालीको उद्दार गर्ने सरकारको योजना – Namaste Dainik
विदेशबाट दैनिक ६ हजार नेपालीको उद्दार गर्ने सरकारको योजना
May 17, 2020 NamastedainikLeaveaComment on विदेशबाट दैनिक ६ हजार नेपालीको उद्दार गर्ने सरकारको योजना
काठमाडौं । कोरोनाले लकडाउन भएपछि विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारले उद्धार गर्ने भएको छ । कोरोना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा भारत लगायतका देशबाट नेपालीको उद्धार गर्नेबारेमा ठोस छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको छ ।
भारत,युएई,कतार,सिंगापुर लगायतका देशले आफ्ना नागरिक लैजान दबाब दिन थालेपछि सरकारले नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघि सो प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको तथ्य सम्झाउदै एक मन्त्रीले यसपटक मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित हुने बताए ।
समितिका अनुसार दैनिक ६ हजारको संख्यामा उद्धार गरेमा मात्रै उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन सकिने मन्त्रीहरुको तर्क छ । विदेश पढ्न गएका,समस्यामा परेका,रोजगारी गुमाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काइन लागिएको पनि सरकारले जनाएको छ । यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सका वाइडबडी जहाज प्रयोग गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र पछि स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने सरकारको तयारी छ । तर क्वारेन्टाइन खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने शर्त अगाडी सारिएको छ । लकडाउनका कारण भारतमा मात्रै ४० लाख नेपाली अलपत्र परेका छ भने विदेशमा पनि लाखौ मानिस उद्धारको पर्खाईमा रहेका छन ।
विदेशमै रोकिए १ सय ३७ नेपालीको शव।
कोरोनाको डरले मुम्बईदेखि दुई हप्ता हिडेर नेपाल आइपुगेको पाँचौं दिनपछि मृत्यु
धुलिखेलमा काँग्रेस ब्राण्डको पानी जार !
काठमाडौंमा बुधबार दिउँसो फेरी भुकम्पको धक्का
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरणको दर्ता शुरु : सरकारले तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य !
August 10, 2020 Namastedainik